Oppo A52 White (4GB/128GB)-19 ~ ICT.com.mm
HomeOppo A52 White (4GB/128GB)-19
Oppo A52 White (4GB/128GB)-19
Display: 6.5 inches Resolution: 1080 × 2400 pixel (405 ppi density) CPU: Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) Chipset: Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold &... [Learn more]
Brand: OppoSKU: 164196N/ASee more: Mobile Phone, Mobile Phones, New Arrivals, Oppo, ProductsFilter by: outofstock, Smartphones
ကင်မရာအရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး အရည်အသွေးမြင့် Hardware တွေကို အသုံးပြုပေးထားတဲ့ ‘Mid-range’ အဆင့် Oppo A52 စမတ်ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်။ Selfie ကင်မရာကို Punch Hole ပုံစံလေးနဲ့ ထည့်သွင်းထားပြီး ဘေးဘောင်လုံးဝန်းတဲ့ မျက်နှာပြင်အပြည့်ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ အတွင်းမှန်မျက်နှာပြင်အတွက် LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors အမျိုးအစားကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား 6.5” နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် ကျယ်ဝန်းတဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ Resolution အားဖြင့် 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) ရရှိမှာဖြစ်ပြီး တောက်ပမှုက 480 nits အထိရှိတဲ့အတွက် လုံးဝကြည်လင်တောက်ပတဲ့ရုပ်ထွက်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ OS အဖြစ် Android 10 နဲ့ မောင်းနှင်ပေးထားပြီး User Interface အဖြစ် ColorOS 7.1 နဲ့ အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ System ပိုင်းမှာ နာမည်ကျော် Snapdragon ရဲ့ Qualcomm SM6125 Snapdragon 665 (11 nm) Chipset ကို အသုံးပြုထားပြီး CPU အဖြစ် 2.0 GHz Octa-core Processor ကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ ဂရပ်ဖစ်ပိုင်းအတွက် Adreno 610 (GPU) ကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ Internal Storage – 128 GB ပါဝင်တဲ့အတွက် ဒေတာတွေကို မိမိစိတ်ကြိုက် သိမ်းဆည်းထားနိုင်မှာပါ။ RAM 4GB ဖြစ်တဲ့အတွက် အသုံးပြုနေကြ Apps တွေကို အဆင်ပြေပြေနဲ့ တပြိုင်နက်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဂိမ်းကစားဖို့အတွက်လည်း အဆင်ပြေစေမှာပါ။ နောက်ကျောကင်မရာစနစ်မှာ 12MP (wide) + 8MP (ultrawide) + 2MP (macro) + 2MP (depth) စုစုပေါင်း ကင်မရာလေးလုံးကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ ကျယ်ပြန့်တဲ့ရှုမျှောခင်းတွေကို ရိုက်ယူနိုင်သလို လှပတဲ့ Portrait ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်း ရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Ultra Clear Night Mode က ညဘက်မှာပါ လှပတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို ရိုက်ကူးနိုင်စေမှာပါ။ 4K ဗီဒီယိုအထိ ရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ကင်မရာစနစ်ဖြစ်ပြီး Anti-shake နည်းပညာပါဝင်တဲ့အတွက် ကင်မရာတုန်ခါမှုမရှိဘဲ တည်ငြိမ်တဲ့ရုပ်ထွက်နဲ့ဗီဒီယိုတွေကို ရိုက်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့ဘက်မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ 16MP (wide) Selfie ကင်မရာမှာ AI Beautification နည်းပညာပါဝင်တဲ့အတွက် အချိန်မရွေး လှပတဲ့ Selfie ဓာတ်ပုံတွေကို ရိုက်ကူးနိုင်စေမှာပါ။ အသံအရည်အသွေး ကောင်းမွန်တဲ့ စတီရီယိုစပီကာတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး လုံခြုံရေးအတွက် Finger Print ကို ဘေးဘက်မှာ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ 5000mAh အမျိုးအစား ဘတ္ထရီကို တပ်ဆင်ထားပြီး Fast Charging 18W (Type-C) Adapter နဲ့ အလျင်အမြန်အားပြန်သွင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ အရောင်ကွဲအနေနဲ့ အနက်ရောင်၊ အဖြူရောင်တို့ဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ အာမခံသက်တမ်း တစ်နှစ် ပါဝင်ပါတယ်။
The entire series is equipped with 128 GB/UFS 2.1 storage. The continuous reading performance improves by 61%², making it faster to install apps and copy files. 4GB/LPDDR4x memory support multiple apps and games run at the same time.